Dam-Jadiid, Ictisaam iyo Daljir oo rooso siyaasadeed la siiyey - Caasimada Online
Home Warar Dam-Jadiid, Ictisaam iyo Daljir oo rooso siyaasadeed la siiyey
Dam-Jadiid, Ictisaam iyo Daljir oo rooso siyaasadeed la siiyey
DID oo aan u soo Gaabiyey Damjadiid, Ictisam iyo Daljir waxaa laga xaaqay saaxada ciyaaraha Siyaasada
Wareega kowaad waxaa ku haray Damjadiid oo Madaxweyne rabtay, wareega labaad daljiir oo isa siisay Prime minister Maadaama ay aminsanaayeen in rigooorada uu farmaajo dhaliyey ay iyagu salaxeen, kadib markii ay dhaawacyo xun u geysteen Damjadiid iyo Kabtankoodii hore ee Shiikh shariif, wareega ugu danbeeya waxaa ku haray Ictisaam oo aaminsanaa inay Farmaajo Sero B Ka soo Saareen Maadaama Farmaajo oo ciyaarihii 2012 uu Sero B u laabtay kadib markii uu dhaafi waayey 14 dhibcood.
Tababare farmaajo iyo kabtanka kooxda Kheyre ayaa kooxdooda gabi ahaanba Ka ilaaliyey xidigaha DID waxeyna Tarabuunka Ka fiirsanayaan qaab ciyaareedka ay u dheelayaan team-Ka shalay uu kheyre line up-Ka Ka dhigay,iyadoo taageerayaal badan ay Aminsanyihiin in lagu wareeray qaab
Ciyaaareedka DID oo ku dheela fanaando xayesiintooda ay ku badantahay taajiriinta carabta.
Kooxda Daljir oo la aminsanyahay inay rigoore iska dhaliyeen ayaa waxay dib u bilaabeen tababar xoogan si mar kale goormada ugu soo laabtaan.
Kooxda Damjadiid waxay la daalanyihiin ciyaarihii adkaa ee ay soo dheeleen 4 sano ee la soo dhaafay waxeyna hada ku jiraan fasax, iyagoo 100 ciyaaryahan ku leh kooxda uu maamulo jawaari, waxeyna kooxda baarlamaanka Ka soo iibsanayaan xidigo badan oo ku kacsan tababare farmaajo kadib markii laga saaaray shaxdii uu shalay kabatan kheyre sameeyey, iyagoo fursadaas ka faa’iidaysanaya ayey rabaan Damjadiid inay ciyaar adag la dheelaan inta uusan soo dhamaan xili ciyaareedka farmaajo ee 4 sano.
Kooxda Ictisaam ee uu kabtanka Ka yahay Fahad Yaasin ayna ku jiraan Cabdulqadir Cosoble iyo Daahir Mohamed Geele ayaa wali rajo Ka qabo in tababare farmaajo uu siiyo boosaska yaryar ee kooxda sida kooxda caafimaadk ee ciyaartoyda daweeya iyo kuwa tabarbaraha caawiya.
Waa kaftan is boorti siyaasadeed dhib ha u arkin.
Sawirka was Messi Neymar iyo Suarez waxaa la soo Gabiyaa (MSN) waa xili ay xanaaqasanyihin ciyaartana ay Ka fa dhiyaan.
Waxaa la mida (DID)
W/Q: Bile Gurxan